Iduku izicubu Production Line Series Factory - China iduku izicubu Production Line Series Abakhiqizi futhi abahlinzeki
I-OK-250 Type Double Lanes High-Speed ​​Iduku Production Line
Ukusebenza Okuyinhloko Nezici Zesakhiwo 1.Adopt "U" isakhiwo nokuhlelwa, ukusongwa ngokuqhubekayo nokupakisha, ukubukeka okuhle, inqubo yokupakisha ebushelelezi, isakhiwo esizinzile futhi esithembekile. 2.Constant ukungezwani control ukugijima iphepha eluhlaza 's ukugijima, isinyathelo-kancane umthethonqubo wokucwebezelisa isivinini izicubu. 3.Adopt BST iphepha eliluhlaza okuzenzakalelayo elinqamula ukulungisa, uhlobo oluncane kanye nohlobo olujwayelekile lwethishu kuyasebenza. Isilawuli se-4.Programmable sokulawula ngokuqinile, sisebenze ngesikrini sokuthinta, ngomsebenzi we-di ...
Uhlobo lwe-OK-150 Type Handkerchiiss Tissue Single Lane Production Line
Izici Zokusebenza Okuyinhloko Nezakhiwo Zokwakheka 1.Adopt Straight line isakhiwo kanye nesakhiwo, ukugoqa ngokuqhubekayo nokupakisha, ukubukeka okuhle, inqubo yokupakisha ebushelelezi, isakhiwo esizinzile futhi esithembekile. 2.Constant ukungezwani ukulawula ukugijima kwephepha elingavuthiwe, isivinini somthethonqubo wokunciphisa okuphansi kwezicubu. 3.Adopt BST iphepha eliluhlaza okuzenzakalelayo elinqamula ukulungisa, uhlobo oluncane kanye nohlobo olujwayelekile lwethishu kuyasebenza. Isilawuli se-4.Programmable sokulawula ngokuqinile, sisebenze ngokuthinta isikrini, i-wi ...
I-OK-120 Type Speed ​​Speed ​​Square Tissue Production Line
Ukusebenza Okuyinhloko Nezici Zokwakheka 1.Adopting Linear structure layout, folding Continuous, packaging, Beautiful look, smooth packaging, solid and reliable structure 2.Constant tension control running raw paper's, step-less regulation speed polishing for tissue. 3.Adopt BST iphepha eliluhlaza okuzenzakalelayo elinqamula ukulungisa, uhlobo oluncane kanye nohlobo olujwayelekile lwethishu kuyasebenza. Isilawuli se-4.Programmable sokulawula ngokuqinile, sisebenze ngesikrini sokuthinta, ngomsebenzi wokubonisa i-fai ...
Uhlobo lwe-Ok-402 Type Full-Auto Iduku Lokugoqa Ukupakisha Umshini
Izici Eziphezulu Zokusebenza Nokwakhiwa kwalo mshini usetshenziselwa ukusonga ngokweqile okuzenzakalelayo kohlobo olujwayelekile kanye neduku lohlobo oluncane (ukuhlangana). Isebenzisa uhlelo lwe-PLC lokulawula isikhombimsebenzisi somuntu, i-servo motor ilawula ukwehla kwefilimu futhi ukucaciswa kokuwa kwefilimu kungalungiswa kunoma yiliphi izinga. Lo mshini, ngokusebenzisa izinto ezimbalwa ukufaka esikhundleni, uyakwazi ukuqhuba iphakethe losayizi ohlukile weduku (okungukuthi ukucaciswa okuhlukile). Imodeli ne-Main Technical Para ...
Uhlobo lwe-OK-602M Type Full-auto Iduku Elihlanganisiwe Lokugoqa Umshini Wokupakisha
Izici Zokusebenza Okuyinhloko Nezici Zokwakhiwa Kungasetshenziswa kumaphakeji ahlukahlukene ahlukahlukene, kuze kufike kumakholomu ama-3 × izingqimba ezi-4 × amaphakethe amancane ama-6, kulula ukuwalungisa, ukulawula okugcwele kwe-servo, ngaphezu kokushintsha isikhunta, ezinye izenzo zingaba kushintshwe kuphaneli yokusebenza. Model & Main Technical Parameters Model Model OK-602M Main body outline dimension (mm) 3700x1160x1780 Speed ​​(bags / min) 1 row 3 layers: 90 bags / min 2 lines 3 layers: 60 bags / min 3 lines 3 izingqimba: 40 bags / min ...